हिमाल खबरपत्रिका | खेर गयो अनुदान
खेर गयो अनुदान
निर्यात प्रोत्साहन गर्न सरकारले ल्याएको नगद अनुदान कार्यक्रम निष्प्रभावी हुँदा डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदान खेर गएको छ।
सरकारले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन अनुदान नदिंदा पनि आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा नेपालको कुल वस्तु निर्यात रु.७४ अर्ब ९ करोड थियो । तर, नगद प्रोत्साहन अनुदान दिन थालेको ६ वर्षपछि आव २०७३/७४ मा निर्यात अझ् घटेर रु.७३ अर्ब १३ करोडमा सीमित भएको छ ।
निर्यात प्रोत्साहन गर्न सरकारले करोडौं अनुदान बाँडिरहनु तर निर्यात झ्नै खस्कँदै जानुले अनुदान कार्यक्रमको असफलता देखाउँछ । सरकारले निर्यात व्यवसायीलाई आव २०६९/७० मा रु.२५ करोड नगद अनुदान बाँडेकोमा गत आव २०७३/७४ मा रु.२९ करोड पुगेको छ ।
नगद अनुदानबाट लाभान्वित व्यवसायी बढे पनि अनुदान कार्यक्रमबाट निर्यातमा सकारात्मक योगदान नपुगेको तथ्य महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि औंल्याइसकेको छ । यस्तो अनुदान नीतिको पुनरावलोकन गर्न महालेखाले सुझव दिएको छ । विश्व ब्यांकद्वारा मार्च २०१७ मा प्रकाशित निर्यात अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारिता बारेको पोलिसी रिसर्च पेपरले पनि सरकारी अनुदानले वास्तविक निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको निक्र्योल निकालेको थियो ।
निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न, विदेशी मुद्रा भिœयाउन तथा व्यापार विविधीकरण गर्न भन्दै सरकारले निर्यातकर्तालाई अनुदान दिन थालेको हो । अनुदान कार्यक्रम लागू भएयता गत आर्थिक वर्षसम्ममा निर्यातकर्ता व्यापारिक फर्महरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्यांकमार्फत रु.१ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख बाँडिसकिएको छ । चालू आवसम्ममा यस्तो रकम डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नेछ । व्यापार नीतिका जानकारहरू पनि अनुदान नीतिले निर्यातमा लाभ पुर्‍याउन नसकेकोमा सहमत छन् । “निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रम पूर्णतः असफल भएको छ, यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ”, अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन् ।
आव २०६९/७० देखि कार्यान्वयनमा आएको अनुदान कार्यक्रममा ब्यांकिङ च्यानलमार्फत अमेरिकी डलरमा तेस्रो देश निर्यात गर्ने निकासीकर्तालाई यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार, निर्यात गरिने वस्तुमा ३० देखि ५० प्रतिशत स्थानीय कच्चा पदार्थ र मानव संसाधन प्रयोग गर्ने गरी ‘भ्यालुएड’ गर्नेलाई त्यसको २ प्रतिशत, ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म गर्नेले ३ प्रतिशत र ८० प्रतिशतभन्दा बढी गर्नेलाई ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिइँदै आएको छ । २०७० सालमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यवस्थाको सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधि पनि जारी गरेको थियो । यसले न्यूनतम ३० प्रतिशत ‘भ्यालुएड’ गर्ने निर्यात उद्योगलाई २ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । ‘भ्यालुएड’ मापन गर्न उत्पादन, त्यसले रोजगारीमा र राजस्वमा पुर्‍याएको योगदानसहितका सूत्र तयार पारिएको छ ।
कार्यविधिले १० वस्तुमा २ प्रतिशत र २२ वस्तुमा १ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । ती १० वस्तुमा प्रशोधित कफी, अर्ध प्रशोधित र प्रशोधित छाला, हस्तकलाका वस्तु, चिया, हातेकागज र उत्पादन, पस्मिना, गलैंचा, मह, प्रशोधित जडीबुटी रहेका छन् । तर, कुल निर्यातको दुईतिहाइ भन्दा बढी निर्यात भारततर्फ हुने गरेकाले बहुसंख्यक निकासीकर्ताले यो सुविधा पाउँदैनन् । तेस्रो मुलुकतर्फ निर्यात गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भिœयाउने निकासीकर्तालाई लक्षित गरिएका कारण भारततर्फ बढी निकासी हुने अदुवा, अलैंची जस्ता सम्भावना र तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादन यो सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
भारतबाट अवैध रूपमा दाल भिœयाएर निर्यात गर्नेले पनि यो सुविधा पाइरहेका छन् । नेपालमा वर्षेनि तीन लाख ६५ हजार टन हाराहारीमा दाल उत्पादन हुने कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ, जुन नेपालकै लागि ठिक्क हुन्छ । यस्तोमा, दाल आयात गरेर यहीं उत्पादन भएको भन्दै शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेको देखाएर अनुदान लिने व्यावसायिक फर्महरू पनि छन् । “वास्तविक उत्पादकले अनुदान नपाउने तर अरूतिरबाट ल्याएर निर्यात गर्नेहरूले अनुदान पाएका छन्”, अर्थशास्त्री डा. पाण्डे भन्छन् ।
सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न घोषणा गरेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) समेत प्रभावहीन देखिएको छ ।
सन् २०१० को एकीकृत व्यापार रणनीति असफल भएपछि सरकारले २०१६ मा नयाँ रणनीति ‘एनटीआईएस’ बनाएको थियो ।
सरकारले नौ वटा वस्तु (अलैंची, अदुवा, चिया, औषधिजन्य जडीबुटी, कपडा, छाला, जुत्ता, गलैंचा र पस्मिना) र तीन वटा सेवा (दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति, सूचनाप्रविधि र पर्यटन) लाई एनटीआईएसको सूचीमा राखे पनि तिनको निर्यात उत्साहजनक छैन । सूचीमा परेका कतिपय वस्तुको निर्यात पहिलेभन्दा ओरालो लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीना (फागुन) सम्ममा भारततर्फ कपडा, जुत्ता, पस्मिना, कच्चा जुट, तयारी पोशाक आदिको निर्यात घटेको छ । चीनतर्फको कच्चा छालाको निर्यात पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ ।
तेस्रो मुलुकतर्फ नेपालको प्रमुख निर्यातमूलक सामग्री मानिएको पस्मिना र कार्पेटको निर्यात पनि गत माघसम्ममा क्रमशः १३.६ र १०.३ प्रतिशतले कमी आएको छ । तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यातमा एनटीआईएस जारी गरेको वर्षभन्दा अहिले तयारी पोशाक, पस्मिना, कार्पेटको निर्यात पनि घटेको छ । निर्यात प्राथमिकतामा परेकै वस्तुहरू अलैंची, ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, पोलिष्टर धागो लगायतका वस्तुहरूको निर्यातको अवस्थामा पनि गतिलो छैन । वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता सैंजु विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न नसकिएको, नेपाली उत्पादकका लागि सहज बजार पहुँच नभएको तथा गुणस्तरमा समेत समस्या रहेकाले निर्यात नबढेको बताउँछन् ।
वस्तु निर्यातको सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच, कच्चा पदार्थको उपलब्धता तथा आम्दानी बढाउन सक्ने सम्भावना लगायतका आधारमा वस्तु र सेवा क्षेत्रको सूची बनाइएको हो । तर, विश्व बजारमा अप्रतिस्पर्धी उत्पादन, ब्राण्डिङ र प्रचारको अभाव, गुणस्तरको कमी लगायतका कारणले अपेक्षित गतिमा निर्यात बढ्न सकेको छैन । एकातिर नेपालले तुलनात्मक रूपमा लाभदायक क्षेत्रको उत्पादन बढाउन सकेको छैन भने गुणस्तरको सुुनिश्चितताका लागि प्रयोगशालाको पनि अभाव छ । वाणिज्य मन्त्रालयले निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको सूचीमा राखेको कफी, फलफूल र तरकारी, जलविद्युत्, चाउचाउ, ऊनका उत्पादन, चाँदीका गरगहना, जूस, कागजका उत्पादन, मह, दालको निर्यात पनि उत्साहजनक छैन ।
न्यून निर्यात तर आयात धान्नै नसक्ने गरी बढ्दा व्यापार घाटा हरेक वर्ष आकाशिंदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीनामा मात्रै व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले बढेर रु.७ खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । प्रति दिन व्यापार घाटा झ्ण्डै रु.३ अर्ब पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा नेपालले रु.५३ अर्ब ४२ करोडको वस्तु निर्यात गरेको छ भने आयात रु.७ खर्ब ६७ अर्ब ३६ करोड । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले रु.७३ अर्ब ५ करोडको निर्यात गरेको थियो । व्यापार घाटालाई थेग्ने रेमिटेन्सको भरथेग गुमेमा देशको अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने जोखिम छ ।